Somaliland oo xukuntay hooyo qolkeeda jiifka ku sharaxatay calanka Soomaaliya
Hooyo loo xukumay in ay qolkeeda jiifka ku goglatay calanka Soomaaliya
Maxkamada Hargeysa ayaa lagu waramay in ay ridday xukunkaan hadalheynta badan dhaliyey.
HARGEYSA, Somaliland – Maxkamad ku taala caasimada Somaliland ee Hargeysa ayaa lagu waramay in ay lix bilood oo xabsi ah ay ku xukuntay haweenay qolkeeda hurdada ku sharaxatay calanka baluuga ah ee Soomaaliya.
Degan Cumar Abshir oo loo garan og-yahay Degan Miiraash ayaa laba bilood xabsi ku qaatay kahor inta aan maanta xukunkaan lagu ridday.
Haweenaydan oo ah hooyada afar caruur ah isla markaana midka ugu yar uu jiray todoba bilood markii lasoo xiray waxaa soo qabtay nabad-sugida maamulka Hargeysa.
Marwo Miiraash oo kasoo jeeda gobolka Awdal ayaa la sheegay in tobbankii sano ee lasoo dhaafay ay deganeyd. Hoygeeda waxaa lasoo wariyey in la bilaliqeystay kadib xarigeeda.
Qoyskooda oo tabiyey in ay soo basaaseen deriskeeda ayaa daaha ka rogay cunugeeda yar ay soo wajahdey xaalad culus kadib markii xorriyadda laga qaadey hooyadii.
Markii ciidamaddu isku dayeen in ay ku qasbaan in ay ka noqoto go'aankeeda, Degan oo muuqaal kasoo dhex-duubtay jeelka ayaa ku celcelisay erayada "Soomaaliya hanoolaato, Soomaaliya hanoolaato".
Dacwad-oogeyaasha maamulka gooni u goosadka ah ayaa ku guuldareystay in ay saxaafadda u soo bandhigaan eedaha lagu soo oogay.
Inkasta oo aysan aqoonsi caalami ah ka helin wadamadda caalamka, Somaliland ayaa tan iyo 1991-dii sheegta in ay ka go'een Soomaaliya. Taas bedelkeeda, dunida waxay u aragtaa maamul hoostaga Muqdisho.
Bishii May, 2019, booliska Hargeysa ayaa u xiray Cabdiraxmaan Maxamed Cali [Aar] oo wiil dhalinyaro ahaa in uu ku labistay calanka Soomaaliya. Maalmo kadib markii xorriyadiisa uu dib u helay wuxuu yimid Muqdisho.
Madaxweynaha waqtiga kasii dhamaanayo ee Farmaajo ayaa bishii Janaayo, 2020 wuxuu qaabilay Aar. Kahor kulankaan, wiilkaan dhalinyarada ah wuxuu booqdey xafiiska ra'iisul wasaaraha KMG ah Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Madaxda ugu sareysa Mareykanka ayaa si carro leh uga jawaabey qoraal ay Ilhan soo...
Doorashada Kursi ka banaan BF oo ka socota Baydhabo
Soomaliya 28.01.2019. 11:51
Caqabadaha ku xeerka kaalin ay Kenya ku yeelato damaca Somaliland
Soomaliya 09.07.2020. 16:20
Guddiga DF Soomaaliya ee shirka Jabuuti oo u jawaabay Muuse Biixi
Soomaliya 18.06.2020. 22:35
Mas'uuliyiinta DF iyo Somaliland ku metelaya guddiyada shirka Jabuuti
Soomaliya 15.06.2020. 16:35